Inona no ilana bisikileta cyclocross? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Bisikileta Cyclocross - referansa feno
Bisikileta Cyclocross - referansa feno
Inona no ilana bisikileta cyclocross?
Cyclocrossbisikileta dia natao hamboarinacyclocrossfampianarana, izay matetika mety ahitana karazana terrains isan-karazany toy ny fotaka, fasika, vatolampy ary na dia ny lanezy aza. Ampidirin'izy ireo koa ny fizarana mihazakazaka izay mitaky ny famoahana ireo mpanafika azybisikileta, ary koa ny sakana izay tsy maintsy hitsambikina na alàlan'ny famoahana na ny fitsidihan'ny alika.
(mozika mahery vaika) - Mandrosoa, ry sakaiza, andao - Guh. Ity bisikileta cyclocross ity no bisikileta serivisy tsy mitete amoron-dalana any am-boalohany. Raha ny marina dia rariny loatra raha milaza fa iray amin'ireo bisikileta amoron-dalana tany am-boalohany.
Fa tamin'izany fotoana izany dia tsy nanana afa-tsy kodiarana 25 milimetatra sy frein cantilever izy ireo. Tsy dia nisy vokany ilay fampifangaroana ka ny hazakazaka cyclocross dia manodidina ny 40 isan-jato. Izao anefa, araka ny hitanao dia niova ny fandrahoana sakafo.
Manana kodiarana midadasika kokoa sy maratra kokoa isika noho ny bisikileta amoron-dalana hanome anao fifehezana sy fampiononana bebe kokoa. Manana bracket ambany ambany kokoa koa ianao mba hahafahanao hanana lalana malalaka kokoa amin'ny pedal. Ary somary milamina kokoa ny fikirakirana.
Manana fifehezana bebe kokoa aho rehefa malama na malalaka - Saingy izao misy bisikileta vaovao ao an-tanàna - Ollie, roa minitra aho, ry sakaiza - Oh eny, izany ihany, tanàna iray ihany. Ny ala sy tendrombohitra no tiako holazaina. Fa eh, ity misy bisikileta iray.
Izy io dia manana kodiarana mivelatra kokoa. Geometry izay mahatonga ny bisikileta hahafinaritra kokoa sy azo antoka kokoa mitaingina amin'ny toe-javatra malalaka. Ary fampiononana bebe kokoa amin'ny endriny noho ny amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka, na noho ireo singa nitaingina azy na ilay endriny.
Ny habe lehibe kokoa, ny fikirakirana azo antoka kokoa, ny fiononana bebe kokoa. Izany indrindra no nampanantenain'ny bisikiletako. - Ie.
Uh, eny, heveriko fa mety manontany tena ianao hoe inona marina ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta vatokely sy bisikileta miampita - azonao atao izany. Soa ihany, satria vao avy nanolotra ara-bakiteny antsika bisikileta cyclecross vaovao sy bisikileta Gravel vaovao avy any Gral i Canyon, dia napetraka tsara isika handinika an'io fanontaniana io indray mandeha ary hamaly izany fanontaniana izany. Ny fanontaniana iray dia tena manan-danja tokoa amin'ny ankamaroanareo izay mety mieritreritra ny fividianana bisikileta manaraka.
zavamaniry proteinina vs proteinina biby
Satria iza? Tsy tianao ve ny fahafinaretana, ny fahaizan'ny toetr'andro ary ny fiononana amin'ny bisikileta manaraka? - Lazao amiko hoe, ity dia ho tena henjana amin'ity? Mba hananana ireo vatokely vaovao sy bisikileta mamakivaky ao anaty tany maloto sy vatokely faran'izay tsara - hoy ianao izany, Ollie, saingy mety ho henjana be izany satria tena tsy nitaingina lavitra be ianao, sa tsy izany? - Ie, um, maitso tsara aho rehefa tsy mandeha. Ny tiako holazaina dia, tsy nanao an'izany mihitsy aho. Raha tsorina.
Saingy heveriko fa midika izany fa afaka manolotra fomba fijery vaovao aho. Betsaka aminareo izay mety mbola tsy nandroaka lalana be loatra koa. Street veteran - Tena tsy tiako ilay teny hoe Veteran Ollie.
Misaotra betsaka. Somary saro-pady aho amin'izany - okay. Handeha bisikileta amin'izay ve isika ry dada? (Mihomehy i Ollie) (mozika mahery vaika?)) - Alohan'ny handehanantsika ireo fahasamihafana ara-batana dia andao aloha hojerentsika raha afaka mahatsapa fiovana isika.
Ka mamorona fifehezana hazakazaka vaovao izahay - (Feo mahery mihetsika) Gravel Cross- Ollie, faritra fohy misy fizarana arabe, faritra misy vatokely, faritra somary maloto, fihazakazahana fohy, fihodinana 2 miaraka amina bisikileta aorian'ny voalohany amboary ao amin'ny faritry ny Pit iray ofisialinay - Vonona ve ianao Cy? - Heveriko fa vonona ho namana aho, eny. - Manisa anao aho. - Okay - telo, roa, iray, mandehana. (mozika mavitrika) homeko fotoana kely i Cy ary hanampy azy hanova bisikileta amin'ity faritry ny lavaka ofisialy ity miaraka amin'ity mofomamy omby ity ihany koa.
Lafiny ratsy, lafiny ratsy. Efatra minitra, 40 ho an'ny fihodinana voalohany. Ka ho hitantsika eo amin'ny bisikileta vatokely ny zavatra ataony.
Masiaka kely ihany, sa tsy izany? Heveriko fa haingana kokoa izy.- (feo miako mafy) Kieskreuz.- Manana ho avy izany.
Ratsy izany - (nihomehy) Eny, ho hitantsika. Efatra minitra, 40 amin'ny fihodinana voalohany. Efatra minitra, 20 amin'ny fihodinana faharoa, efatra minitra, 22 amin'ny fihodinana faharoa.- Mahaliana.- Haingam-pandeha ianao teo.- Tsy dia gaga aho raha ny fahitako azy.
Kodiarana midadasika, bisikileta, inona ny fahasamihafana fito tapitrisa? haingana kokoa noho ireo kodiarana midadasika kokoa. Hafa mihitsy ny bisikileta, toy ny hoe mahatsapa tena mety kokoa amin'ity karazana mitaingina ity izy, satria be vato. Midika izany fa tsy làlan-kizorana izany.
Lakroa fiakarana. Saingy, e, jereo izay hevitrao. Ho hitako ilay zavatra mitovy, tena, nijanona aho Gaga aho fa tena tiako ilay bisikileta Gral gravel.
Ny tiako holazaina dia ity faritry ny vatokely ity. Mahagaga fa somary nihatsara kely ilay bisikileta vatokely. - Ny zavatra tsara azoko antoka dia ny toerana faharoa farafaharatsiny. - Mpandresy.
Tsara namana, andao handeha. Vonona, mandehana. (Mozika manahirana) Avia, Ollie! Mihady soavaly! Namaky ny fantsakana ianao. (Censor beep) - Fanatanjahan-tena tsy misy dikany - Noheveriko fa mpihazakazaka ianao! fihomehezana) (sivana beep) - Mirary soa, mirary soa.
Tongava namana, azonao izany. Azonao izany. - Mandehana, mandeha, mandeha, mandeha! (mihomehy) Mitsambikina fotsiny amin'io sakaiza iray io.
Ity no bisikileta vatokely. Mirary soa, mandehana, mandehana, mandeha! - Wooh! Oay lele! - Mandehana, sakaiza, andao! Mandrosoa! - Ie! - Oh, vitako izany! - Ah! (Censor beep) Gah! Guh! - Tsy afaka mitsahatra mihomehy aho. Angano re izany, eny.
Mandrosoa, vady. - Maninona aho, manidina! - Mandrosoa, mandehana, mandeha! Boom! Minitra iray monja no noharatany. Angamba isika mahalala zavatra izay tsy fantatr'i Mathieu Van der Poel - Eny, tsy dia haingana loatra.
Angamba raha mitaingina cyclocross amin'ny vatokely i Van der Poel amin'ny Daylamites .Mifanohitra amin'ny fotaka matevina any avaratr'i Eropa. Fa na izany aza, tsy ho mora izany.
Ny sakany amin'ny ligy hanombohana azy. Midika izany fa ny zava-misy dia ny gravel cross no gravel kokoa noho ny cross. Noho izany, mba tena hahafantarantsika ny mahasamihafa azy roa dia tsy maintsy hijerentsika ilay teknika.
Raha ara-tantara dia bisikileta vatokely no avy amin'ny bisikileta cyclocross. Ary noho izany, araka ny ho hitantsika, dia misy ADN marobe eo amin'izy roa. Saingy izao dia nisy varavarana nivoha ho an'ny olona hamolavola bisikileta cyclocross izay manokana amin'ny hazakazaka indray.
Ary iray amin'izany ny inflite. Noho izany dia natao manodidina ny làlan-kizika cyclocross mahazatra izay mazàna feno ahitra na fotaka, vovoka somary feno vovoka, ary misy fihodinana tery be. Azonao atao ihany koa ny milaza fa ity bisikileta ity raha ny tena izy dia tsy manana fanadiovana kodiarana kely kokoa noho ilay bisikileta vatokely.
Ary izany dia satria ny UCI dia mamaritra sakan'ny kodiarana 33 milimetatra farany ambony. ary miaraka amin'ny fahalalahana betsaka amin'ny fotaka. Raha ny marina dia natao hialana amin'ny fotaka koa ireo hosoka ireo.
Ho sarotra ny kodiarana 40 milimetatra. Azo antoka fa ao ambadika. Izahay dia ho nanamarina, afa-tsy ity mitondra rotor 140 mily any aoriana ity.
Izay 160. Fa na eto aza dia mety amin'ny tanjony. Tsy handeha hizotra epic Downhill ianao amin'ny hazakazaka Cyclocross Rehefa niverina tany amin'ny hotely aho tamin'ity, dia hitako fa ny hazakazaka midina amoron-dàlana haingana dia mety ho lany tamingana.
Fandikana tonga lafatra ho an'ny taranja cyclocross. Saingy tsy voatery ho an'ny dia mitaingina arabe. Hafa ihany koa ny bisikiletanay roa.
Ary, betsaka amin'izany no miakatra amin'ilay fantsona ambony mitsivalana. Mahalana ianao no mahita bisikileta cyclocross miaraka amin'ny géomèty matevina, ary izany dia satria mila toerana betsaka araka izay azo atao ianao eo amin'ny telozoro eo anoloana rehefa mila haka azy ianao ary mametraka azy eo an-tsorokao. toa ahy, satria mazava ho azy fa ho lehibe tokoa ny endriny.
Saingy rehefa nampianariko nitaingina bisikileta i Emma dia tena tsy azonay antoka hoe ahoana ny fomba hitondrana ny sandriny hamaky ilay sary satria tsy maintsy voafintina noho ny halavany izy, kanefa amin'ity tranga ity dia vao mainka manome tolotra bebe kokoa izy. toerana hitondrana ny sandrinao sy ny sorokao. Fa ny antony mianjera eto dia satria fotsiny ny fipetrahan'ny seza dia somary misimisy kokoa ny fanarahana ny manaraka ny bisikileta; hitanao raha tsy teo izy, paositry ny seza marevaka izany. Ary hahatsapa ho somary henjana izy io.
Ankehitriny, farany, ny géometry ny bisikileta. Raha ny tena izy dia mitovy. Ny halavan'ny rojo vy dia mitovy, ny zoro amin'ny fantson-seza sy ny fantson-doha dia mitovy.
Ny tena maha samy hafa azy izay mety tsy dia misy dikany loatra dia ny haavon'ny bracket ambany. Ka mahomby amin'ny ohatrinona ny fampidinana ny axe bracket ambany raha oharina amin'ny axe-ny. Amin'ity tranga ity dia 11 milimetatra ny haavony ary ny bisikileta mipetraka ambony kokoa.
Ary mahatsapa somary tsy mitombina kely izany rehefa mandeha haingana ianao. Manome anao fahalalahana amin'ny familiana bebe kokoa izany hahafahanao manohy mivezivezy amin'ny lalana. Ary mampalahelo fa toy ny misy eo aminareo izay mihazakazaka cyclocross dia hahafantatra fa tsy maintsy mandeha an-tongotra saika matetika amin'ny hazakazaka cyclocross ianao.
Fa raha mijery ny leanometra misy antsika na ny leanometra misy antsika isika, dia mahaliana fa, na eo aza ny haavon'ny fononteny ambany, ny bisikileta roa dia samy manana ny fahazoana mandeha pedal, satria ny kodiarana midadasika kokoa ihany koa amin'ny Grail. Noho izany, raha ny tena izy, ny fononteny ambany dia mitovy amin'ny tany. Saingy misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny traikefa amin'ny fiara izany. - Mifanohitra amin'izany, ny gravel dia tsy matetika momba ny hafainganana madio.
Izy io dia momba ny fampiononana, kilaometatra lehibe, fahaiza-manao sy traikefa nahafinaritra. Ka manana asa roa izy ireo, noho izany manana kodiarana lehibe kokoa noho ny UCI Mamela anao handeha amin'ny hazakazaka lakroa. Manana boss koa ianao na aiza na aiza ary teboka mifamatotra handravaka ny fanananao rehetra eto an-tany.
Ary asa fampandehanana maro no tafiditra ao anaty rafitra. Manana ny sezan'ny sezak'i Canyon eto izahay, izay afaka miforitra sy manome fampiononana bebe kokoa ao aoriana ao izay tsy maintsy horesahiko momba ny bar. Ka toa somary hafahafa ilay bara hover.
Fa rehefa mitondra azy ianao dia tsy mahatsikaritra ny endriny. Ary mahatsapa tena tsara ho an'ny Canyon izy io, avo fito heny noho ny velaran-kelin'ny Inflite's H31. Satria mety hahita habaka maro karazana kokoa noho ianao amin'ny bisikileta vita amin'ny hazondamosina ianao, dia mila mahay mivezivezy amin'ny 50 sy dimy kilometatra isan'ora ianao, ary amin'ity tranga ity, hanampy ahy hanana sakany maro kokoa aho Mazava ho azy fa nahazo 50/11 isika ary avy eo 34/34.
Matetika ny bisikileta miampita dia manana paingotra tery. Amin'ny maha-mpitaingina eny ivelany tsy dia misy traikefa ahy, ny Grail dia tena manintona ahy satria manolotra fahaizana be dia be. Azoko ampiasaina izany hazakaza-kazo eo an-toerana, izay tsy mila anarahanao ny fitsipiky ny UCI henjana.
Ary aleo hatrehana izany, lavitra ny manatrika hetsika UCI aho. Ah! - Nataoko! - Fanatanjahan-tena adala ihany koa no tonga lafatra amin'ny fitsangatsanganana vatokely sy ny fitsangatsanganana amin'ny bisikileta. Satria tsy dia zatra mihazakazaka eny ivelany aho ary tsy manana fahaizana adala amin'ny zed.
Ny kodiarana lehibe kokoa sy ny kitapom-batana midadasika kokoa ary ny fonosana ambany ambany sy ny fanamafisana ny fanarahan-dalàna ao anaty fefy dia vao mainka manampy ahy hatoky tena kokoa rehefa mandeha bisikileta. Indrindra eny ivelany. Ary mahatsapa tena tsara ho ahy izany.
Bisikileta mifanila amin'ny bisikileta gravel dia inona ny fahasamihafana lehibe? Amin'ny ankapobeny, safidy maromaro kokoa izy io. Na dia milina hazakaza-jaza maloto aza - Ahoana ny bisikileta, Ollie? Ha! Tsia, heveriko fa marina tanteraka ianao. Saingy mbola misitery ihany ny fahasamihafana, sa tsy izany? Ny kodiarana midadasika kokoa dia mampisy fahasamihafana lehibe sy lehibe.
Ny bracket ambany somary avo kokoa dia manova ny toetra amam-panahy. Ka raha tsy arosonao any aoriana ny iray hafa dia mety tsy voatery ho hitanao ireo fahasamihafana ireo satria ianao eo amin'io toerana tsara vintana nananantsika io ankehitriny io. Mahavariana ireo tarehin-tsoratra mamirapiratra, sa tsy izany? - Ie, marina izany.
Ankehitriny, raha te hahita atiny ivelan'ny arabe misimisy kokoa ianao miaraka amin'ny fahaizana adala miaraka amin'ny zed, zahao ny lahatsoratra mampientanentana an'ny bisikileta Cy sy ny bisikileta bisikileta any Islandy. Tsindrio eto ambany - Eny, azafady mba omeo ankihibe ity iray ity raha nankafizinao izany.
Raha ampitahaina amin'ny tendrombohitrabisikiletany 'crosser dia tsy mahay manokana ary ny anaobisikiletadia ho beHaingankaingana, mahomby kokoa ary mety kely ihany koa ny lanjany. Fa izany dia ampahany amin'ny mahatonga ireto bara milatsaka ambany iretobisikiletamahafinaritra be.10 Okt 2019
Inona no maha samy hafa ny bisikileta gravel sy cyclocross?
CyclocrossNy hazakazaka dia mitaky fikirakirana henjana sy mazava ary famindrana herinaratra mahomby, famolavolana fotaka mandoto fotaka ary koa safidy ho an'ny endrika maivana.Bisikileta vatokelymazàna manana sakany midadasika kokoa, manomboka amin'ny jaunts maharitra adiny iray ka hatramin'ny mitaingina andro, na dia fitsangatsanganana an-bisikileta mandritra ny andro maro aza.18 Aog 2020
Azoko ampiasaina amin'ny bisikileta ve ny bisikiletako?
HO AN'NYcyclocrosskodiarana, ianaoafaka mampiasaindrindrabisikiletavelaran-koditra. FampisehoanacyclocrossNy kodiarana mihazakazaka dia tonga amin'ny endrika tubular, toy izany koa ianaoafakalakaoly tsotra izaonykodiarana tubular taloha amin'ny kodiaranao ary mahazoaAmpiasaoavy amin'izy ireo.14 Apr 2020
Inona no maha samy hafa ny bisikileta cyclocross sy ny hybrid?
nytsy fitovianany roa dia mitoetra miaraka amin'ny fahaizan'ny toetrany. nybisikileta cyclocrossmizara endri-javatra sasany amin'ny lalanabisikileta, mahatonga azy ireo ho mpandeha an-tongotra voalohany. nymifangaromodely manana singa sasany amin'ny hazakaza-tsoavaly miarakamiaraka amin'nyTENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAbisikileta. Midika izany fa azonao atao ny manala azy ireo amin'ilay lalana nokapohina tamin'ny vatokely na lalana maloto.
Miadana ve ny bisikileta cyclocross?
Ka tsy hitovy amin'izay ianaoMoramorateo amin'ny hazo fijalianabisikiletamisy kodiarana malama kokoa. Ho afaka mitaingina lava koa ianao, satria nybisikiletatsy hikapoka anao loatra noho ny fivontosana sy ny tsy fanarahan-dalàna eny amin'ny làlana. Izao dia miresaka momba ny mitaingina kodiarana CX tena izy ianao, tsara tokoa ny kodiaranamoramidina ianao.23 Jul 2015
Ny bisikileta cyclocross tsara ho an'ny lavitra?
Raha ny abisikileta cyclocrossNy hoemetyho an'ny fitsangatsanganana; Marina tokoa. Ny valiny sasany dia nanonona ny tsy fahampian'ny eyelets sy ny fiakarana ho an'ny talantalana. Na izany aza, vitsivitsy ihanybisikileta cyclocrossmanana fahaizana mametraka fitoeran-dàlana (na racks) tokoa.
Afaka mitaingina bisikileta cyclocross eny an-dalana ve ianao?
Na eo aza ny fahamatorana rehetra, dia azo ekena tanteraka izanymitainginanybisikileta cyclocrossmananabisikiletaary mampiasa kodiarana kely fotsiny miaraka amin'ny tery kokoalalanakodiarana. Milamina ihany koa raha ny marinamitainginaamin'nylalanamiaraka amin'ny midadasika kokoacyclocrosskodiarana sy kodiarana izayianareoefa manana.
Avy aiza ilay anarana hoe bisikileta cyclocross?
Rehefa maheno ny 'Cyclocross' ianao dia mieritreritra fitambarana bisikileta iray sy bisikilety an-tendrombohitra. Ny anarana dia avy amin'ny hazakazaka amina hazakazaka izay ahitana faritra samihafa toa ny fotaka, vatokely, fasika ary ahitra.
Iza amin'ny bisikileta cyclocross tsara indrindra no vidiana?
Ny Santa Cruz Stigmata CC dia bisikileta CX karbôna feno mikendry ny tsena cyclocross avo lenta. Izy io dia misy singa SRAM tsara kalitao miaraka amin'ny freins hidina hidina ary fonosana ambany SRAM DUB. Ny fanamboarana gearing dia 1 × 12, miaraka amina crankset 42T SRAM Force 1 lehibe ary kasety 10-50T any aoriana.
Naharitra hafiriana ny fanatanjahantena Cyclocross?
Cyclocross dia efa nisy hatramin'ny fiandohan'ny taonjato lasa, ary efa fanatanjahantena efa tena nilamina ankehitriny. Saingy amin'ny resaka bisikileta dia tsy nitsahatra nivoatra izy io, indrindra tao anatin'izay taona vitsy lasa izay niaraka tamin'ny fipoahan'ny fananganana fibre karbonika nandroso kokoa, ny fitomboan'ny lazan'ny frein disc ary ny fiovana mankany amin'ny kodiarana tsy misy fantsona.